कसरी आईपीएल डिप्रेलेटर प्रयोग गर्ने? तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? यहाँ तपाईंलाई भन्नुहोस् कि यो कसरी गर्ने - प्राविधिक सूचना-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
कसरी आईपीएल डिप्रेलेटर प्रयोग गर्ने? तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? यहाँ तपाइँलाई यो कसरी गर्ने भनेर बताउँछ
समय: 2020-09-01 हिट्स: 3
केही समय पछि, यो गर्मी हो। धेरै केटीहरू डिप्रेलेसनको लागि तयार छन्। त्यसोभए depilator प्रयोगको प्रक्रियामा, तपाई मध्ये धेरै जना यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ र केमा ध्यान दिन आवश्यक छ। म तपाईंसँग केहि चीजहरू बाँड्न चाहन्छु जुन मेरो धेरै वर्षको अनुभवको साथ निराशामा ध्यान दिनुहोस्।
कसरी डिस्पिलेटर प्रयोग गर्ने
डिपाइलेशन इन्स्ट्रुमेन्टको सिद्धान्त कपालको फोलिकल नष्ट गर्नु हो, र बढ्दो कपाल उपचारको लक्षित हुँदैन, त्यसैले पहिलो चरणमा कपाल हटाउन रेजर प्रयोग गर्नु हो। सामान्य depilators एक रेजर संग सुसज्जित छन्।
दोस्रो, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, केश हटाउने उपकरणले जेल प्रयोग गर्न आवश्यक छ, यदि सबै कपाल हटाउने यन्त्रहरूले जेल प्रयोग गर्नु पर्छ भने? पछिल्ला दुई बर्षमा, कपाल हटाउने प्रक्रियामा जेलको प्रयोग धेरै सामान्य छ। उत्पादनहरूको लगातार अपडेटको साथ, हालको घरेलु कपाल हटाउने उपकरणलाई जेल प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन।
तेस्रो, उत्पादनको प्रकाश आउटलेटको साथ छालालाई बिस्तारै छुनुहोस्, त्यसपछि अपरेशनको लागि अर्को क्षेत्रमा जानुहोस्। छालाको चोटपटकबाट बच्न आदेशमा एकै ठाउँमा धेरै पटक अपरेट गर्न सकिदैन। प्रत्येक स्थान एक पटक संचालित हुनेछ, र दोस्रो अपरेसन चक्र पूरा गरे पछि सुरू गरिनेछ। चक्र २- times पटक। चश्महरू अपरेशनको बखत लगाउनुपर्दछ। सामान्यतया, सबै उपकरणहरू चश्मा लगाएर सुसज्जित हुनेछन्।
चौथा, प्रयोगको फ्रिक्वेन्सी। सामान्यतया भन्ने हो भने, कपाल हटाउने उपकरणको साथ उपचारको कोर्स तीन महिना हुन्छ। तलको चित्रमा देखाइएझैं, म यस उत्पादनलाई पहिलो महिनामा हप्तामा एक पटक प्रयोग गर्दैछु, दोस्रो महिनामा प्रत्येक दुई हप्तामा र तेस्रो महिनामा एक पटक, यस्तो प्रकारको अपरेसनले उपचार कोर्स पूरा गर्न सक्छ। मूल कारणमा कपालको समस्या समाधान गर्नुहोस्।
ठिक छ, आज म तपाईसँग केहि बाँडिरहेको छु कि कसरी डिस्पिलेटरको प्रयोग गर्ने। अर्को लेख ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू हो। हेरीदिनु भएकोमा धन्यवाद।
अघिल्लो: के कपाल हटाउने उपकरण छाला लाई असर गर्छ?
अर्को: आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग को रहस्य